Fantaro Ny Cloghers: Vehivavy Nomena Tosika Ary Mibilaogy Ho An’ny Zon’Olombelona- · Global Voices teny Malagasy
Fantaro Ny Cloghers: Vehivavy Nomena Tosika Ary Mibilaogy Ho An'ny Zon'Olombelona-
Voadika ny 22 Oktobra 2014 17:40 GMT
Fampanarahana teotrandro mikasika ireo Tetikasa Vatsian'ny Rising Voices
Cloghers training. Photo provided by project.
Ireo Kambodziana bilaogera, na cloghers, dia mampitombo hatrany ny fampiasàna ny aterineto mba hanombohana resadresaka matanjaka momba ny zon'olombelona sy ny fiovàna sosialy. Isan'izy ireny ny vondrona iray ahitàna vehivavy nomena tosika, fantatra amin'ny hoe Cloghers, mampiasa ny bilaogy mba hitondra ny feon'izy ireo.
Ny Empowering Cloghers Project (tetikasa fanomezana tosika ny Cloghers) an'ny CCHR dia manome fanofànana ho an'ireo vehivavy Kambodziana izay mianatra ao Phnom Penh, amin'ny fanomezana azy ireo fahaiza-manao hanombohany ny bilaoginy manokana. Taorian'ny fanofànana voalohany, nampientanentana anay ny hanolotra ho anao ny sasantsasany tamin'ireo Cloghers sy ny bilaogin-dry zareo.
Ampiasain'ireo Cloghers ny bilaogin-dry zareo mba hizaràny ny nofinofiny hisian'ny hoavy mamiratra ho an'i Kambodza. Kang Vilay, ohatra, milaza hoe “Zava-mahaliana ahy ny hampiroborobo ny rariny sy hiaro ny zon'olombelona, indrindra fa ny zo hahazo fitsaràna tsy miangatra”, ary dia ampisainy ny bilaoginy hanatratrarany azy io. Olana iray hafa ny fanabeazana, izay marobe amin'ireo Cloghers no liana aminy. Ung Meylegn niteny hoe “Mino ny fanabeazana aho, raha tsy misy azy tsy afaka hanampy izao tontolo izao isika. Tokony ho an'ny isam-batan'olona ny fanabeazana.” Ankoatr'ireo nofy samihafa ananan-dry zareo, dia mazava fa mifofotra hanangana Kambodza iray tsara kokoa ireo Cloghers.
Maro tamin'ireo Cloghers no tsy maintsy nikisaka avy tany amin'ny ambanivohitra fonenany tany mba ho ao Phnom Penh hianatra eny amin'ny Anjerimanontolo, ary avy amin'ny faritra samihafa. Nisafidy ny hianatra dingana isankarazany izy ireny, ary maro no nankahàtra ny sokajin'asa napetraky ny fomban-drazana ho azy ireo. Ohatra, ny Clogher Bo Branda dia nisafidy ny hianatra ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao, safidy tsy dia mahazatra loatra ho an'ny vehivavy. Clogher iray hafa i Sum Dany, mahatsiahy ny nandrenesany ireo mpifanila vodirindrina taminy nanakivy ankizivavy iray tsy hianatra. Na teo aza izany, efa andalam-pamitàna ny fianarana lalàna ao amin'ny Anjerimanontolom-panjakana momba ny Siansan'ny toekarena sy ny Lalàna – “Royal University of Law and Economic Science” izy.
Efa manana traikefa midadasika be ihany koa ry zareo Cloghers. Young Vichny, ohatra, dia niasa taminà tetikasa iray momba ny fiovaovàn'ny toetrandro tao amin'ilay Fandaharanasa Fampiroboroboana ny Fahafaha-manaon'ny Tanora. Seng Sreanghong indray niasa tainà ONG samihafa momba ny fifidianana, ary ny zon'olombelona sy ny fiarovana ny fandriampahalemana. Ireo traikefa isankarazany sy ny fahalalàna ananan'ireo Cloghers dia mampiseho fa manana ny hery handraisana anjara amin'ny fomba miabo mba hisian'ny fiovàna eny anivon'ny fiarahamonina misy azy ny vehivavy avy amin'ny fototra rehetra.
Tena liana fatratra manokana amin'ny resaka fanoratana anaty bilaogy ireo Cloghers. Hong Sokheang dia mankafy ny fikarohana ary “ny fizaràna vaovao izay mifandray amin'ny momba an'i Kambodza sy ireo firenena manerana izao tontolo izao.” Nilaza fihetsehampo hafakely ihany koa i Sreanghong, izay toa ny Cloghers no manana azy, rehefa nilaza hoe “hianatra mafy aho ary ho lasa bilaogera mahay any aoriana.”
Amin'ny ankapobeny, misolo tena andian-taranaka Kambodziana tanora izay liana amin'ny resaka fiovàna sosialy sy ny zon'olombelona ireo Cloghers. Raisinay an-tànan-droa daholo ireo Kambodziana hamaky ny bilaogin-dry zareo sy handray anjara amin'ny adihevitra misonga amin'izao fotoana, izay tena ilaina ho an'ny hoavin'ny zon'olombelona ao Kambodza.
Azonareo arahana amin'ireto ny bilaogin'ireo Cloghers :